Jama waa 16-jir loo diiday in lala mideeyo hooyadiis, maxaa sababay? | Somaliska
Jama waa 16-jir loo diiday in lala mideeyo hooyadiis, maxaa sababay?
Wiilka lagu magacaabo Jama oo da’diisa tahay 16-sano jir ayaa loo diiday in lala mideeyo hooyadiis xitaa markii uu cadeeyay dheecaanka DNA. Migrationsverket ayaa sheegtay in Jama, walaalihiisa iyo hooyadiis ay kala hadleen. Jama ayaa wargeyska Aftonbladet u sheegay in uu isaga oo 14-sano jir ah ka soo cararay xarakada Al-shabaab.
“Ina adeerkey ayaa ku biiray al-shabaab isagoo dilay labo walaalahay ah iyo walaashay. Waxaan ka cabsaday in uu anigana i dilo ama uu igu qasbo in aan ku soo biiro, sidaa darteed ayay hooyaday i caawisay in aan soo baxsado” ayuu u sheegay wargeyska isaga oo ka hadlaya sababtii uu uga soo tagay hooyadiis.
Markii sharciga la siiyay ayuu Jama dalbaday in lala mideeyo hooyadiis balse sanad ka dib ayaa diidmo loo soo tuuray. Dheecanka DNA ee laga qaaday isaga, walaahiis iyo hooyadiis ayaa muujiyay in uu saxyahay. Migrationsverket ayaa xaqiijisay in Amina ay tahay hooyada Jama balse maadaama aysan aqoonsi wadan laga doonayo in wareysi laga qaado, kaasoo dhibaato la soo daristay Jama iyo qoyskiisa.
Migrationsverket ayaa sheegay in markii wareysiga laga qaaday in hooyada ay sheegtay in caruurta aabahood la waayay sanadkii 2013 balse Jama iyo walaalihiis ayaa sheegay taariikh kale. Waxaa sidoo kale lagu qabsaday in dhalashada mid ka mid ah walaalaha Jama oo mar lagu sheegay in uu dashay November 20 halka markale la sheegay in uu dashay November 21.
Haweenayda lagu magacaabo Agneta Deros oo wakiil u ah Jama ayaa sheegtay in ay tahay markii ugu horeysay ee ay aragto qof diidmo lagu siiyo arimahaas. Maadaama uu dheecaanka DNA cadeeyay. Waxay wargeyska u sharaxday dhaqanka Soomaalida iyo in dad badan aysan aqoonin taariikhda ay dhasheen. Hada ayay racfaan ku celiyeen Migrationsverket oo go’aan kale laga sugayo.
Arintaan ayaa muujinaysa muhiimada ay leedahay in dadka isku dacwoonaya aysan kala hadlin oo ay si qoto-dheer uga baaraan degaan waxyaabaha ay u sheegayaan Laanta Socdaalka maadaama ay hada raadinayaan sabab walba oo ay qofka ku diidi karaan.
Xabiibo waa gabar soomaaliyeed oo dooneysa in booliska Finland iyo soomaalidu wada shaqeeyso
Kabtan matii says:
Cashar fiican baan ka bartay mowduucaan
Allow u fududeey maskiinka
Ilaahoow usoo wada saqir amuurta inta xayiran yaa rab
Asc Runti wa arin mudan in waxlagabarto allaha ufududeyo
ninka dadka qaldan saxa says:
somalidu waxay ku maahmaahdaa hadalku inta uuna kasoo bixin afkaaga ayuu aamaan yahay. markaas waxaa fican qofku in uuna kala hadlin. ilahay ha u fududeeyey miskiiin kan yar
January 5, 2016 at 12:02
dadku isku maskax ma ahaa oo xiita hadii aad kun jeer u sheegto aan xasuusanayn oo markay tagan safarada isku dhaaxdadanayo iswidhshkana waba u fa.iido in qofku isku dhaxdato hada waxa jooga gomalkan taganahay nin caruurtisa iyo xaskisa uu suugayo moodo dhan 8 sano oo xita dheecanki lagaqaday waxay ku haystan uun wiil yar aya laweeydiyay goorma abaha kugu dabaysay waxa uu yiri kii yara 3 sano ka hor abiihina waxa uu sheegay in xita arkin wiilkisa waliigi oo kasotagay isago ku jiira calosha hooyadii ugu dabaaystii abiihi hada waxa loso diiray mardabe wax daawcwada maso fuuran kartii
January 6, 2016 at 12:26
A/c walal waan ka xumahay arinka lasoo darsay wiilka yar, rabi waxan uga baryaa inuu u fududeeyo insha allah. Waxan anigu hore i caawiyay gabadh sidan oo kaleeto ku dhacday . Runtii ma adka hadii tariikh kaliya lagu haysto . Sababtoo ah tariikhda maaha wax dadkeenu ku wanaagsan yahay oo xuso sidii tariikhda dhalashada oo kale . Waxa dhici karta in hooyadu wax qorin ooney akhriyin ama qalad ka iman karo turjumaanka. Markaa dacwad haka ceshtaan loyar xitaa ha dalbado baan dhihi laa. Gabadhaan cawiyay way gulaysatey alxamdulilaah. Markaa dadaal insha allah . Lycka till
adooontiii alle says:
waalalo alle haku fududeyo inshaa allaah alle wuu ku saahlaya
January 5, 2016 at 23:52
asc dhmn asxaabta wlalwhega ah wxn raby in aan idin weydiyo wxa jiro hooyo aan qaraabo nhny wxena u dodesay ilmaheda wxna lo diday oo wxa la siiyay reject wax dhcan d.n.a xitaa mlga qaadin kwrama arintas dhcan laa an lasiiyo diidmo wxane shegen waxa loga diiday arin ku saabsan wxn ka shkunay waqtiga aad dhahdy waad guursday mrka mxa haboon hda wey ku cilisay dacwda mxwaxa habon in loyar qabsato ame ee is ka sugto migration ka asxaab qofki fikrda ame igaga xog dher arintani wxn ka codsnaa in ee igaga sojawabto arintan dhmntina insha’allh
January 6, 2016 at 08:13
Baashe , arintaa ah in qof aan dheecaan laga qaadin diidmo la siiyo dad ay ku dhacday waan arkay , si ugu fiicani waa iyadoo dheecaan DNA lacagta iska bixisa oo iskeed isu soo cadaysa , hadana Ethopia , Kenya iyo Uganda waxaa jirta shirkad hawshaa qabata oo reer sweden ah
awada mrka hore adaa u mhdsnthy adiga iyo dhmn asxaabta kle, lkn saxb dhecanka dadki loo dodaye wey mareyn oo waaa lga qaday blse qofki sweden jogty ooo ahed mamadi ilmaha u dodesay aya dhcanki D.N.A lga qaadin oo didmada la siiyay iyado wx dhcan ah kga qaadin
Jimcale Maantaad ugu fiicnatahay, waxaad soo qortay Mawduuc aad u qiimo Badan faaiidona u leh, oo ka wacyi galinya dadka isu doodaya in aysan kala Hadlin oo interviewgoodu isku mid noqdo hadii kale dhibka intan leeg qabsan doono, aadbaan ugu riyaaqay Mawduucan allaa yacisak halkaas kasii wad Dadaalka maqaalkana aadbaan usoo dhaweeyay.
Asc jimcaale bror lamber lagaala soo xareero no soo qor fadlan
yahye wolfa says:
Walahi wax badan aya ka fahme somaliska news aniko indaa kalafur ayan ku hele
nolow Abayo ama abowe
iyo inta so ababushe newskan wan idin salame
Kkkkk maxaa kugu yaabka badnaa aad meeshaan KU aragtay
Um Lina says:
Asc dhamaan asxaabta. Ilahay wiilka yar iyo ehelkiisa aaha u saqiro Amin.anigana dhibka wiilkaan haasto mid la mid ah aa i haasto ama ka daran qofkii talo ii hayo walalaha musliminta.waxan dhalay caruur caruurtana waxay joogee somali anigana waxa imaaday iswidhan markan is dhibayay caruurta ma sheegan sababta aan u sheegi waayay abaha caruurta dhalay ayaa ii diiday oo ugu dhahay Iska i loow oo caruurtaada mar kale ma arkidoontid .mar asagiina wuu dhintay caruurtiina cidlo ee soo is taageen markuu dhintay ayan dacwad u furay caruurta oo dabadeedna magareshinka didmo oo i siiyay caruurtiina marba qof aan u geeyaa itobiya ee joogaa caruur kalena waan haastaa oo sanad walbo waan u tagaa hada swedhana ma joogi Itoobiya ma joogi maxaa sameeyaa asxaabee ila taliya Wcs.